Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): MOTAA မိုးတား ဆိုသည်မှာ
MOTAA မိုးတား ဆိုသည်မှာ
MOTAA ကို မြန်မာ အသံထွက် အနေနဲ. "မိုးတား" လို. အသံထွက် နေပေမဲ့၊ ဒီစကားလုံးဟာ ကောင်းကင်က မိုးကို တားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဟုတ် သလို၊ အခြားသော ဆက်စပ် ပါတ်သက်မှု များလည်း မရှိပါ။ Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology. ကို အတိုကောက် သင်္ကေတ ပြုထားတဲ့ M.O.T.A.A ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ တွေ ခေါ်ဆိုတဲ့ "ဗေဒင်" ဆိုတဲ့ စာလုံးဟာ- သက္ကရိုက် စာလုံး "ဗေဒ" တနည်း အားဖြင့် "ဝေဒ" ဆိုတာက ဆင်းသက် လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို. "Veda" လို. ရေးတဲ့ ဒီစာလုံးဟာ "အသိဥာဏ် ပညာ (Knowledge)" ကို ဆိုလိုပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုး အနေနဲ. ကြည့်မယ် ဆိုလျှင် လည်း - "Astrology" ဆိုတဲ့ စာလုံးဟာ "Astro" နဲ. "Logic" ဆိုတဲ့ စကား ၂-မျိုးကို ပေါင်းစည်း ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
"Astro" ဆိုတာဟာ ကောင်းကင်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ နက္ခတ်တာရာ၊ ဂြိုဟ်တို.ရဲ. လည်ပါတ်သွား လာမှု တွေကို လေ့လာ တွက်ချက်တဲ့ ပညာ ဖြစ်ပြီး၊ Astronomy ဟာ သိပ္ပံ ပညာရပ် ဖြစ်တာကို မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်ပါ။ နောက် စာလုံး ဖြစ်တဲ့ "Logic" ဆိုတာဟာ "ယုတ္တိ ဗေဒ" ဆိုတဲ့ ကြောင်းကျိုး ဆက်စပ် မှုကို လေ့လာ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက တော့ ၀ိဇ္ဇာပညာ ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်- "Astrology" ကို စုပေါင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆို လိုက်မယ် ဆိုလျှင် - "ကောင်းကင်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ နက္ခတ် တာရာ၊ ဂြိုဟ်တို.ရဲ. လည်ပါတ်သွား လာမှု တွေကို လေ့လာ တွက်ချက် ပြီး၊ ကြောင်းကျိုး ဆက်စပ် မှု ကို လေ့လာ တဲ့ ပညာ" ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ဆောင်းပါး တွေမှာ- သိပ္ပံနည်းကျ သုတေ သန တွေ အကြောင်းကို ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
MOTAA စံနစ်တွင် အသုံးပြုသော ဂရပ်များ အကြောင်း။
မိုးတား ဝေဒပညာ စနစ် (MOTAA Vedic System) သည် သိပ္ပံနည်းကျ နက္ခတ္တပညာ ဟု နှုတ်အားဖြင့် သက်သက် ပြောနေသော ပညာရပ် မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ.ကျကျ သက်သေ ပြနိုင်သော ပညာ- တနည်းအားဖြင့် ကိန်း ဂဏန်း အကောင်အထည် ဖြင့် ဖေါ်ပြနိုင်သော ပညာ ဖြစ်၏။
နည်းစနစ် တစ်ခုသည် မည်ရွေ.မည်မျှ ကောင်းမွန် မှန်ကန်ပါသည် ဆိုစေ ကာမူ- ထိုအချက်ကို အချက်အလက် အတိအကျ ဖြင့် သက်သေ မပြနိုင်ပါက- သိပ္ပံပညာ ကို လေ့လာ သင်ကြား ဘူးသူများ- နိုင်ငံခြား တကာ ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေး ကြည့်လိုက်ပါက- အရာ ရောက်ခြင်း မရှိတော့ပါ။
ဤဘလော့ဂ် ရှိ ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုရာတွင် “မိုးတား အခြေခံ (MOTAA Basic)” နှင့် ယှဉ်တွဲပြီး လေ့လာပါက- နားလည် ရန် လွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဂရပ် (၁) တွင် -Sun (တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်)၊ Moon (တနင်္လာဂြိုဟ်) အစရှိသည့် ဂြိုဟ်တစ်လုံးချင်းစီ၏ အင်အား ကို MOTAA နည်းစနစ် ဖြင့် တွက်ချက် ဖေါ်ပြထားသည်။
ဤဂရပ် တွင် အနက်ရောင်ဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ- ထိုဂြိုဟ်အနေဖြင့် မူရင်း အင်အား မည်ရွေ.မည်မျှ ရှိနေသည်ကို ဖေါ်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ (၄င်း အား တွက်ချက် ခြင်းကို လေ့လာ လိုသူများ အတွက် အခမဲ့ သင်ခန်းစာများတွင် ပို.ချပေးပါမည်။) အစိမ်းရောင် ဖြင့် ဖေါ်ပြ ထားသည်မှာ- ၄င်းဂြိုဟ်အပေါ်သို.- Functional Benefic ခေါ် ကောင်းသော တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် နေသော ဂြိုဟ်များ မှ- ကောင်းသော အင်အားဖြင့် လွှမ်းမိုး ထားသော ပမာဏသက်ရောက်မှု ကို ဖေါ်ပြနေသည် ဖြစ်ပြီး၊ အနီရောင် ပြထားသော အနေ အထားမှာ- ထိုသက်ဆိုင်ဂြိုဟ် အပေါ်သို. Functional Malefic ခေါ် မကောင်းသော တာဝန်ကို ယူထားသော ဂြိုဟ်များ (ကာရက ဂြိုဟ်ဆိုးများ) က အဆိုးအားဖြင့် လွှမ်းမိုး ထားသည်ကို ပြသ ထားသော အနေအထား ဖြစ်သည်။ စနေ၊ အင်္ဂါ ဆိုလျှင် ဂြိုဟ်ဆိုး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ ဆိုလျှင် ဂြိုဟ်ကောင်း ဖြစ်သည် ဟူသော လှေနံဓားထစ် အယူအဆမှာ- အတိအကျ မမှန်ကန်ပါ။ စနေ၊ အင်္ဂါ တို.သည် သဘာဝ ဂြိုဟ်ဆိုး (Natual Malefic) များ ဖြစ်သော်လည်း၊ ၄င်းတို.၏ မူလ ဇာတာတွင် ရပ်တည်သော အနေအထားအရ- အချို.သူများ အပေါ်တွင် ကောင်းကျိုးပြုတတ်သည်။ ထိုနည်းတူပင်- သမားရိုးကျ ကျမ်းများအရ- ဂြိုဟ်ကောင်းဟု ယူဆထားကြသော ဂြိုဟ်များ ဖြစ်သည့် ကြာသပတေးနှင့် သောကြာ တို.၏ အဆိုးဓါတ်ကို ရထားသူ ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ထိုကာလများတွင် တစ်စိမ့်စိမ့် ဒုက္ခ ခံစား တတ်ကြ ရသည် ကို သိထားရန် လိုပါသည်။
အထက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော ဂရပ် (၁) သည် လုပ်ကြံခံရ၍ ကွယ်လွန်သွားသော ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ဂရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုဂရပ်ကို ကြည့်ပါက- ဗုဒ္ဓဟူးသည် အခြားဂြိုဟ်တို.နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အင်အား အကောင်းဆုံး အနေ အထားတွင် ရှိနေပြီး ဂြိုဟ်ဆိုး တို.၏ နှောက်ယှက် ဖျက်ဆီး ခြင်း မှ ကင်းလွတ်သည်။ တနင်္ဂနွေနှင့် တနင်္လာ တို.သည် အင်အားကောင်းသည် မှန်သော်လည်း -၄င်းတို.အား ဂြိုဟ်ဆိုးတို.၏ ဖျက်ဆီးမှု (အနီရောင်ဖြင့် ပြထားသည်။) ကို မြင်တွေ.နေရသည်။
(မှတ်ချက်- Rahu ရာဟု နှင့် Ketu ကိတ်တို.၏ အနေအထားကို ဤအဆင့်တွင် စစ်ဆေးရန် မလိုသေးပါ။ နောင်တွင် အသေးစိတ် ရှင်းပြ ပါမည်။)
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဂရပ် (၂) တွင် ဖော်ပြထားသည်က - ဇာတာရှင်၏ ဘ၀တွင် အရေးပါသော ဘာဝ (House) တို.၏ အင်အားကို ဖေါ်ပြထားသော ဂရပ် ဖြစ်သည်။ ဤဂရပ် သည်လည်း ၀န်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ဂရပ်ပင် ဖြစ်သည်။
ဘာဝ တို.၏ အခြေခံ အဓိပ္ပါယ်များ မှာကို အောက်တွင် ရှင်းပြထားပါသည်။ နောင်တွင် MOTAA သင်ခန်းစာ ပို.ချချက် များတွင် ပို၍ အသေးစိတ် ဖေါ်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဇာတာ တစ်စောင်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ဆိုရာတွင်- ဘာဝတို.နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တို.၏ အဓိပ္ပါယ် ကို ပူးတွဲ၍ ဖေါ်ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အသေးစိတ် မရှင်းပြတော့ပဲ- MOTAA သင်ခန်းစာ ပို.ချချက် များတွင်သာ ရှင်းပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက- “မိုးတား အခြေခံ (MOTAA Basic)” ဆောင်းပါးနှင့် ယှဉ်တွဲ လေ့လာပါ။
ဖေါ်ပြပါ ဂရပ် (၂) အနေအထားကို ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် ဇာတာရှင်တွင်- ၂-တန်.ဘာဝ၊ ၆-တန်.ဘာဝ၊ တို. ၏ အင်အား ပမာဏ(အနက်ရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။) ၂-တန်.ဘာဝ၊ ၃-တန်.ဘာဝ၊ ၉-တန်.ဘာဝ၊ ၁၂-တန်.ဘာဝ၊ တို.အား-ဂြိုဟ်ကောင်း များက လွှမ်းမိုး ထား သောပမာဏ- (အစိမ်းရောင် ဖြင့် မြင်နေရ သော ပမာဏ) တို.ကို အလွယ် တွေ.မြင် နိုင် ပါသည်။ (မှတ်ချက်- ဘနာဇီယာ ဘူတို၏ ဇာတာကို သုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါးတွင် အသေးစိတ် ဖတ်ရှုပါရန်။)
အောက်ဆုံးတွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ- ဘ၀ တစ်သက်တာ အတွက် ကံကြမ္မာ အနိမ့်အမြင့်ကို ညွှန်ပြသော ဂရပ် (၃) ဖြစ်သည်။ MOTAA စနစ်ကို အသုံးပြုထားသော ဂရပ်ကို ကြည့်ရုံဖြင့် မည်သည့် အချိန်ကာလသည် ဇာတာရှင် အတွက်- ဒုက္ခအများဆုံးသော ကာလ၊ မည်သည့် အချိန်ကာလ ပိုင်းသည် ကံအကောင်းဆုံး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် စိတ်အချမ်းသာ ဆုံးကာလ ဖြစ်မည် ဆိုသည် ကို ဖေါ်ပြနေသည်။
ဤသည်မှာ MOTAA စနစ်၏ ထူးခြားချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်း ဘိုးဘွားတို.၏ ပညာရပ်များကို စနစ်တကျ ပိုင်းခြား လေ့လာ မှသာလျှင်- ထိုပညာတို.၏ အနှစ်သာရ အဓိပ္ပါယ်ကို တွေ.ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး- လူပြော၊ သူပြော၊ ကျမ်း အစောင်စောင် တို.ကို နှုတ်ငုံ အလွတ် ရယုံမျှ နှင့်မူ- မည်သော အခါတွင်မှ- ဝေဒပညာ ရပ်၏ ထူးခြားသော တိကျသည့် စွမ်းရည် ကို ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
Labels: Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology, MOTAA၊ မိုးတား၊ နက္ခတ်၊ ဗေဒင်
ကျနော် ၂၀၁၂ ကို သေချာစွာ ဖတ်နေပါတယ်။ ရေးသားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုလျှက်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ။ ထီပေါက်တဲ့ ဇာတာထက် ထီမပေါက်သေးတဲ့ ဇာတာကိုများ စစ်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျ။